Fitodihana Any Amin’ny Fiteny Mapuche · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2017 5:43 GMT
Sary avy amin'i Fernanda Canofre‏
Manazava i Eddie Avila fa ny zo fototra ho an'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany dia ny zo hifandray amin'ny fitenin-drazany manokana. Misy ny fanamby ara-teknika, ara-pitenenana ary ara-kolontsaina manodidina izany – indraindray ary isika tsy manana endri-tsoratra ho amin'izany, indraindray tsy voasoratra ilay fiteny. Mitolona mafy ny mpikatroka ara-pitenenana raha tia hitondra ny fiteny ho amin'ireo sehatra fampitan-kevitra (media) vaovao ireo.
Raha miara-miasa amin'ny Wikipedia sy ny hafa, dia miasa amin'ireo fiteny teratany manerana an'i Amerika Latina i Eddie sy ny ekipa Rising Voices. Iray amin'ireo nahazo vatsy ho amin'izany programa izany i Simona Mayo, izay miezaka ho amin'ny fitandroana ny teny Mapuche.
Miorim-paka ao Arzantina sy Chile ny fiteny mapuche, ary misy ny kolontsaina miasa ho amin'ny fampianarana Mapudunguaiñ ny vahoaka. I Mayo dia miasa ho an'ny fikambanana antsoina hoe Kom Kim Mapudunguaiñ, izay midika hoe “hianatra Mapudunguaiñ ny rehetra”. Ny tanjon-dry zareo dia ny hampianatra ny olona – teratany sy ny hafa – hiteny Mapudunguaiñ ho fiteny faharoa hainy. Nahoana moa ny olona iray tsy manana vakoka Mapuche no hianatra izany fiteny izany? Manana anjara toerana amin'izany ny aterineto.
Monina an-tanandehibe ny ankamaroan'ny mponina Mapuche ao Arzantina sy Chile, vokatry ny fotoana lava dia lava niainana fanjanahantany. Satria noterena honina an-tanandehibe ny fianakaviana, dia nanapaka ny fampitana ilay fiteny isan-taranaka izany. Maro ireo taranaka mpiteny Mapuche nampanginina. Ny olona miasa amin'ny fampianarana ny teny Mapudunguaiñ dia zanaka sy zafin'ireo taranaka nampanginina ireo.
Ny tanjona dia ny hiresahana, hikarajiana, hihananihaniana ary hanaovana rap sy hanoratana an-tserasera amin'io teny Mapudunguaiñ io. Mampiasa ny aterineto i Mayo sy ny hafa hampielezana ny fiteny, mampiasa ny fitaovana tahaka ny tranonkalan-dry zareo, sy ny habaka tahaka ny Mapuexpress, tranokala iray mizara vaovao momba ny sisintany Mapuche tao anatin'ny 17 taona. Misy tranonkala iray, Kimeltuwe, mampiasa ny Facebook hampianarana ny fiteny ho an'ireo rehetra liana. Noho izy tao amin'ny Facebook, dia nahatratra ireo Mapuche sasany izay tsy liana hianatra ny fiteny sy ireo olona tsy manana fifandraisana amin'ny Mapuche fa nahita ny fiteny tantserasera.
Tsy ny fitandroana sy ny fitakiana ny tanindrazambeny ihany no mahaliana ny tanora mpikambana ao amin'ny hetsika Mapuche, fa ny zaratanin'ny fiteniny sy ny kolontsainy ihany koa, na antserasera na andavanandro. Tandindonin-doza ny tanora Mapuche ao Chile sy ao Arzantina, izay nahitana tanora Mapuche ampolony maty tany Arzantina tamin'ny herintaona. “Rehefa miresaka hetsika Mapuche isika, dia resaka tolona sarotra mety ahafatesana olona izany. Rehefa miresaka fananganana mari-panondroana izahay, dia misy sanda mahaolona izany. Fitaovana hafa hitolomana ny aterineto.”